बादीलाई ऋणको भारी, नागरिकता साहुको कब्जामा, • Kalanga News
गृह/जीवनशैली/स्वास्थ्य/बादीलाई ऋणको भारी, नागरिकता साहुको कब्जामा,
बादीलाई ऋणको भारी, नागरिकता साहुको कब्जामा,
बझाङ : बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका १० चैनपुरका सुरेन्द्र बादीले घर चलाउन १० वर्षअघि चैनपुरकी लक्ष्मी सुनारसँग ३० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। अहिले ब्याजसमेत जोड्दा ऋण रकम ७३ हजार पुगेको छ। सुरेन्द्रको घरमा साहु लक्ष्मीले ताला लगाइदिएकी छन्। सुरेन्द्र बाहिर छन्। उनका भाइ कमल अर्काको घरमा बस्दै आएका छन्। हरिना बादी र पुनी बादीले पनि साहु भुजीदेवी सुनारको ऋण तिर्न सकेका छैनन्। ब्याजमा निकालेको रकम २२ हजार पुगेको पुनीले बताइन्। ‘घरमा ताला लगाएका त छैनन् तर ताला लगाइदिने धम्की धेरैपटक आइसक्यो’, उनले भनिन्। चैनपुरकै बम्म बादीको लक्ष्मी सुनारसँग लिएको ऋण एक लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जुनतारा बादीले भुजीदेवी सुनारबाट लिएको ऋण ९३ हजार पुगेको छ। ‘पहिला १० हजार ऋण लिएको, अहिले लाख पुगिसकेछ, कसरी तिर्ने ? ’ बम्म बादीले भनिन्। ‘कमाइ केही छैन। त्यतिबेला सानोतिनो मजदुरीले ब्याज तिरियो, गाउँघरमा मागेर बिहानबेलुकाको छाक टार्ने हामीसँग ऋण तिर्ने रकम कहाँबाट आउनु ? ’ उनले भनिन्। १३ परिवार बसोबास रहेको चैनपुरका बादीले स्थानीय ६ जना सुनार जातिका साहुको सात लाख ७० हजार ऋण तिर्न बाँकी छ। सरकारको जनता आवास कार्यक्रमबाट बादीका घर निर्माण भइरहेका बेला उनीहरूको ऋणको पोल खुलेको हो। बादी समुदायलाई सरकारले घर बनाउन रकम दिन थालेको छ। यही मौकामा साहुले रकम मागेपछि उनीहरुले ऋण तिर्न बाँकी रहेको जानकारी बाहिर आएको हो।
अधिकांश बादीले जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकता धरौटीमा राखेर ऋण लिएका छन्। ‘गरिब बादीहरुले कहिल्यै उन्मुक्ति नपाउनुको पछाडि सुनार जातिका साहु पनि हुन्। अप्ठेरो परेका बेला रिन त मागियो, तर अहिले ब्याज धेरै लगायो’, पुनी बादीले भनिन्। बादीहरूका अनुसार १०÷१५ हजार रुपैयाँसम्म ऋण लिएकाको ब्याज जोडेर लाख रुपैयाँ नाघेको छ। सुनार जातिका साहुले भने तमसुक बनाएर औंठा छापसहित कागजात दुरुस्त राखेका छन्। तमसुकअनुसार लक्ष्मी सुनारको चार लाख ४५ हजार, भुजीदेवी सुनारको ९३ हजार आठ सय, सानु चित्रकारको ४६ हजार, नरेश चित्रकारको नौ हजार पाँच सय रकम उठ्न बाँकी छ। यस्तै रामगिरी सुनारको चार हजार ६ सय, राधिका सुनारको एक लाख ७१ हजार पाँच सय गरी सात लाख ७० हजार रुपैयाँ बादीहरुले तिर्न बाँकी छ। जनता आवास कार्यक्रमका लागि साहुकहाँ रहेका लालपुर्जा र नागरिकता वडा नम्बर १० का अध्यक्षले मागिदिएका छन्। तर अहिले उनीहरुको ऋणका कारण समस्या भइरहेको छ। ‘लालपुर्जा र नागरिकता मागेर बादीका घर निर्माण त भए तर ऋण चुक्ता गर्न समस्या भएको छ। साहुले नयाँ घरमा बस्न अवरोध गरिरहेका छन्’, जयपृथ्वी नगरपालिका १० का वडा अध्यक्ष दलबहादुर विष्टले भने। चैनपुरमा ८ जना बादी परिवारका घर बनेका छन्। पाँचजना बादीको लालपुर्जा साहुको कब्जामै भएकाले उनीहरुको घर निर्माण गर्न नसकिएको वडाध्यक्ष विष्टले बताए। ‘साहुहरूले आफ्नो ब्याजसहितको ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गरिरहेका छन्। नत्र नयाँ घरमा ताला लगाइदिने धम्की पनि आएको छ’, हरिना बादीले भनिन्। अधिकांश बादीले जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकता धरौटीमा राखेर ऋण लिएका छन्। ‘गरिब बादीहरुले कहिल्यै उन्मुक्ति नपाउनुको पछाडि सुनार जातिका साहु पनि हुन्। अप्ठेरो परेका बेला रिन त मागियो, तर अहिले ब्याज धेरै लगायो’, पुनी बादीले भनिन्। बादीहरूका अनुसार १०÷१५ हजार रुपैयाँसम्म ऋण लिएकाको ब्याज जोडेर लाख रुपैयाँ नाघेको छ।सुनार जातिका साहुले भने तमसुक बनाएर औंठा छापसहित कागजात दुरुस्त राखेका छन्। तमसुकअनुसार लक्ष्मी सुनारको चार लाख ४५ हजार, भुजीदेवी सुनारको ९३ हजार आठ सय, सानु चित्रकारको ४६ हजार, नरेश चित्रकारको नौ हजार पाँच सय रकम उठ्न बाँकी छ। यस्तै रामगिरी सुनारको चार हजार ६ सय, राधिका सुनारको एक लाख ७१ हजार पाँच सय गरी सात लाख ७० हजार रुपैयाँ बादीहरुले तिर्न बाँकी छ। जनता आवास कार्यक्रमका लागि साहुकहाँ रहेका लालपुर्जा र नागरिकता वडा नम्बर १० का अध्यक्षले मागिदिएका छन्। तर अहिले उनीहरुको ऋणका कारण समस्या भइरहेको छ। ‘लालपुर्जा र नागरिकता मागेर बादीका घर निर्माण त भए तर ऋण चुक्ता गर्न समस्या भएको छ। साहुले नयाँ घरमा बस्न अवरोध गरिरहेका छन्’, जयपृथ्वी नगरपालिका १० का वडा अध्यक्ष दलबहादुर विष्टले भने। चैनपुरमा ८ जना बादी परिवारका घर बनेका छन्। पाँचजना बादीको लालपुर्जा साहुको कब्जामै भएकाले उनीहरुको घर निर्माण गर्न नसकिएको वडाध्यक्ष विष्टले बताए।